बलात्कारीलाई सजाय:: Naya Nepal
कक्षा ५ मा पढ्ने मेरो छोरी बाल अधिकारसम्बन्धी पाठ पढ्दै थिइन् । एकै छिनपछि ‘बाल अधिकारभित्र केके पर्छ ?’ भनेर सोधिन् । कान्तिपुर दैनिककै ‘छोरीहरू कतिन्जेल असुरक्षित ?’ शीर्षक सम्पादकीय पढ्दै गरेकी मैले बुझेअनुसार भनें– पढ्न पाउनु, स्वतन्त्र भएर हाँस्न, खेल्न र डुल्न पाउनु नै बाल अधिकार हो ।
नेपाली भाषा मज्जाले पढ्न जानिसकेकी छोरीले त्यो शीर्षक पनि पढिन्, म कालोनीलो भएँ । सधैंजसो बलात्कारका समाचारले पत्रिका भरिएको हुन्छ । एकातिर छोराछोरी समान हुन् भनेर वकालत गर्दै हिँड्नुपरेको छ, अर्कातिर छोरीलाई साङ्लो बाँध्न समाजले बाध्य पारेको छ । कतिन्जेल भन्नु– छोरी, तिमी पल्लो घरको दाइको काखमा नबस, त्यो अंकलको छेउमा नजाऊ, पसलको दाइले बोलाउँदा नसुनेझैं गर, टाइट लुगा नलगाऊ … ! हिँड्न, बोल्न र हाँस्न पाउने उसको स्वतन्त्रतालाई मैले नै बाँध्दै छु ।
बलात्कारलाई समाजले एक प्रकारले मलजल गरिरह्यो । कानुनले पानी हाल्यो । अहिले यो ठूलो वृक्ष भएको छ । तीन महिनाको अन्तरालमा ६४२ करणी मुद्दा दर्ता हुनुले यसको जरा झन् गहिरिँदै गएको देखिन्छ । उस बेला रेडियोमा पोखरामा नमिता–सुनिताको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाबारे समाचार धेरै बजिरहन्थ्यो रे ! मेरा बुबाले अब आउने नमिताले यस्तो घटना भोग्न/सुन्न नपरोस् भनेर मेरो नामै नमिता राखिदिनुभएको रे ! तर त्यसको साढे तीन दशकपछि पनि त्यस्ता अमानवीय घटना भइरहेका छन् । निर्मूल हुने कुनै संकेत देखिँदैन । दिनहुँजसो मारिन बाध्य छन् दिदीबहिनी । यस्ता घटना सुन्न नपरोस् भन्ने बुबाहरू आज पनि छोरी जन्मिँदा त्रस्त छन् । यति धेरै बलात्कार भइरहँदा समाज, कानुन र राज्य यिनलाई रोक्न किन असफल भएका हुन् ? यो कस्तो सामाजिक संरचना हो जसले बालिका/महिलालाई असुरक्षित बनाइरहेको छ ? सामाजिकीकरण शोषण, हत्या, हिंसा र बलात्कारको प्रमुख कारक तत्त्व हो । मेरो छोरो कुनै अप्रिय घटनामा सामेल हुन्छ भने यहाँ दोषी समाज हुन्छ, मेरो संस्कार हैन । किनकि मेरो छोराको बढी समय मसँग भन्दा साथी, विद्यालय र अरू सामाजिक एजेन्टसँग बितिरहेको हुन्छ ।
अहिले बलात्कारको अभियुक्तलाई मृत्युदण्डको सजायको माग भइरहेछ । तर एउटालाई मृत्युदण्ड दिएर बलात्कार कम हुने होइन । घटना किन हुन्छ भनेर ‘रुट कज’ खोज्न जरुरी छ । माया–प्रेम, रिस–आवेग पनि व्यक्तिगत हैन । माया र आवेग कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा हामी कस्तो समाजमा हुर्किएका छौं भन्नेले निर्धारण गर्छ । पुरुषले महिलालाई एक्लै भेटे बाटो छेकेर बलात्कारको प्रयास गर्ने र महिलालाई बचाउन हिरो आउने सिनेमा हेरेर हामी हुर्कियौं । धर्म, मिडिया र पाठ्यपुस्तकमा पनि यसरी नै महिलालाई कमजोर र पुरुषलाई बलियो बनाइएको छ ।
धर्मले मानव समुदायलाई बाँधेर राख्छ । सामाजिक मूल्यको निर्धारण धर्मले गरेको हुन्छ । हिन्दु धर्ममा श्रीमती–श्रीमान् सम्बन्धलाई भगवान् र दासका रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । पुरुषजति नै शिक्षित भए पनि महिला धर्ममा बाँधिन बाध्य छन् । गरुड पुराणले भन्छ– परिवारको हरेक क्रियाकलापमा छोराको आवश्यकता पर्छ न कि छोरीको । त्यस्तै मनुस्मृतिमा भनिएको छ– महिलाहरू केटाकेटीमा बाबुको बन्धनमा हुन्छन्, युवती अवस्थामा श्रीमान्को नियन्त्रणमा र बुढ्यौलीमा छोरामा निर्भर । हाम्रो समाजको ऐना यही हो । हरेक समय पुरुषले महिलालाई नियन्त्रण गर्ने भएपछि उसले लगाउने लुगा, बोल्ने भाषा अनि खास गरी शरीरलाई पुरुषहरूले पेवा ठान्न थाले । फलस्वरूप बालिकादेखि वृद्ध आमासम्मको लुगा, भाषा, योनि र प्राणमाथि हस्तक्षेप भइरहेको छ । हिन्दु धर्ममा महिलालाई शुद्ध–अशुद्ध अर्थात् देवी–बोक्सीको दोहोरो रूपमा हेरिन्छ । यी दुवै पाटामा महिलाहरू निकै दमित छन् । जस्तो कि, महिलालाई शुद्ध राख्न यौनाभ्यासलाई नियन्त्रण गरिन्छ अनि यो भंग हुँदा अशुद्ध ठानिन्छ ।
महिला देखेपछि आवेगमा आउनुपर्ने, नमाने एसिड छ्याप्ने, बलात्कार अनि हत्या गर्ने पुरुषको मानसिकता समाजले नै सेट गर्छ । जब माया र आवेग नै सामाजिकीकरणबाट निर्धारण हुन्छ, व्यक्तिविशेषलाई कुनै सजाय तोक्दा त्यो क्षणिक हुन पुग्छ । जरामा बिस्तारै विष हाल्न जरुरी छ र त्यो विष हो– विद्यालयका पाठ्यपुस्तक । यस्ता पाठ्यपुस्तक लैंगिक विभेदका विषयहरूले भरिएको हुनुपर्छ । नानी च्यापेको मात्र नभएर प्लेन उडाउँदै गरेका आमाको फोटो पनि राख्नुपर्छ । यसले हरेक छोरीलाई घरबाहेकको दुनियाँको कल्पना गर्न सिकाउँछ । खाना पकाउँदै गरेका बुबाको फोटो पनि राख्नुपर्छ, ताकि हरेक छोराले बुझून् खाना पकाउनु भनेको साझा काम हो । हरेक घटनाको पछि कामको बाँडफाँट र लैंगिक विभेदले पनि उत्तिकै भूमिका खेलेको हुन्छ ।
अब धर्मका शब्दहरूको पुनर्व्याख्या जरुरी छ । सिंगो समाज परिवर्तन हुनुपर्छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हरेक क्षेत्रले मुहार फेरे मात्र बालिकादेखि वृद्धासम्म सुरक्षित हुनेछन् । यसमा राज्यको भूमिका सबैभन्दा बढी छ । राज्यले मेरी छोरीलाई साँझमा घरबाहिर निस्केर खुला आकाश हेर्दै सपनाहरू बुन्न पाउने वातावरण र सुरक्षा दिनुपर्छ ।
२१ वर्षीया युवतीमाथि यौन हिंसा र यातना : ‘दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याऊ’
बझाङ — ससुरा, काका–ससुरालगायत आफन्तहरूबाटै निरन्तर बलात्कार र चरम यातनाको सिकार भएकी बझाङ सुनकुडाकी २१ वर्षीया युवतीमाथि भएको घटनाप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चासो व्यक्त गरेको छ ।
आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले घटनाको छिटो अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।
हालसम्म अनुसन्धानमा भएको प्रगति र पीडितको स्वास्थ्य उपचारबारे जानकारी गराउन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । आयोगका सुदूरपश्चिम प्रमुख झंकरबहादुर रावलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता घटना दोहोरिन नदिन संलग्नलाई शीघ्र कानुनी दायरामा ल्याई अनुसन्धान गर्न आयोग आग्रह गर्दछ ।’
विज्ञप्तिमा पीडित महिलाको शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको परीक्षण गरी निःशुल्क उपचार गर्न पनि सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ । पीडित युवतीको बझाङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । बुंगल–२ को दलित परिवारकी युवतीको तीन वर्षअघि बित्थडचिर–९ का दलित युवकसँग बिहे भएको थियो । सानैमा आमाले छाडेपछि काकाले नै संरक्षण गरी ०७४ असारमा उनको बिहे गराइदिएका थिए ।
बच्चा नभएकाले उपचार गर्न भन्दै श्रीमान्सहित सासूससुरा र नन्दले उनलाई भारत लिएर हिँडेका थिए । त्यसपछि उनीमाथि श्रीमान्, ससुरा, नन्दका श्रीमान् र काका ससुराले समेत बलात्कारका साथै बर्बर यातना दिन थाले । उनीहरूले वेश्यावृत्तिमा समेत लगाउने गरेको युवतीले बताएकी छन् । यसैबीच, पीडितका बारेमा कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएपछि सहयोग गर्न व्यक्ति र संघसंस्था इच्छुक देखिएका छन् ।
अमेरिकामा बस्दै आएका रक्तदान अभियन्ता अर्जुनप्रसाद मैनालीले नगद १५ हजार सहयोग दिएका छन् । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले राहत दिने तयारी भइरहेको सहसचिव रोशनी श्रेष्ठले बताइन । दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मन्त्रालयका तर्फबाट गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको उनले बताइन् ।